समीक्षा/समालोचना Archives - sailungonline
प्रजाति संज्ञानमा ‘परम्परागत आदिवासी ज्ञान’
पृष्ठभूमि मानव सभ्यताको विकाससँगै भिन्न पर्यावरणमा भिन्न समयमा मानिसले बाँच्नका लागि सघर्ष गर्दै आए । तिनै संघर्षहरु कालन्तरमा जीवन जीउने आधारको रुपमा स्थापित भए । त्यसैलाई संस्कृतिको रुपमा मानिसले अघि बढाउँदै गए जुन ...
पैतालामा हिउँ, आँखामा हिमाल: एक अनुभूति
विषय प्रवेश: संसारमा प्रचलित साहित्यिक विधाहरूमध्ये नियात्रा विधा पनि एक प्राचीन विधा हो । पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै साहित्यिक जगतमा नियात्रा विधा प्रभावशाली र लोकप्रिय विधाको रूपमा स्थापित भएको छ । अङ्ग्रेजी शब्द ट्रा...
आदिबासी जनजाति आन्दोलनका क्रियाशील एवं सशक्त अभियन्ता मोहन गोले तामाङद्वारा लिखित ‘जातिवादको शल्यक्रिया’ नामक पुस्तक हालै प्रकाशनमा आएको छ । डा.तारामणि राईले सम्पादन गरेको प्रस्तुत पुस्तकलाई ताम्सालिङ नलेज सेन्टर काठमाडौ...
मानिस जन्मन्छ, मानिसको अन्त्य पनि निश्चित छ । यो सास्वत सत्यलाई न भगवान मानिएका रामले न कृष्णले वा बुद्धत्व प्राप्त गरेका गौतम बुद्धले या अरु कसैले परिवर्तन गर्न सक्छ । यो सार्वलौकिक सत्यता हो जसलाई कसैले अस्विकार गर्न स...
पृष्ठभूमि जीवन कतिपया अवस्था कल्पना भन्दा पनि विचित्रको हुने गर्छ । त्यही विचित्रभित्रको सचित्रमा जीवनलाई थमाइ राख्दा जीवन वास्तवमै पूर्ण भइदिन्छ । पूर्णताको तिनै अध्यायमा उपअध्यायका इकाइहरुको व्याख्या, विश्लेषण र संश...
समालोचना : औपन्यासिक तत्वको कसीमा तामाङ उपन्यास ‘प्राङ्बोला छेटाङ’
१. उपन्यासको परिचय तामाङ स्रष्टा योकबहादुर घिसिङ कवि तथा उपन्यासकार हुन् । कवि उनको प्रथम व्यक्तित्व हो भने उपन्यासकार चाहीँँ द्वितीय व्यक्तित्व । साहित्य, पत्रकारिता र राजनीति उनका व्यक्तित्वका आयामहरु हुन् । यद्यपि ...
आत्मकथाको इमानदारीको कुरो उप्किदा आजकल निकै उठ्ने गरेको छ एउटा नामः दमनराज तुलाधर । केही साल अघि एक पत्रकारमित्रबाट सुनेको हुँ उनको चर्चा । तर दुर्लभ भइसकेको यस पुस्तक पढ्ने हुटहुटी उसै सेलाई गएको धेरै भइसकेको थियो । जब ...
यसरी सुरु गरौँ । तामाङ, एक जाती मात्रै होइन; आफैँमा एक पूर्ण सभ्यता हो । उसको आफ्नै भाषा छ । आफ्नो मौलिक संस्कृति, परम्परा, लवाईखवाई, जीवन पद्धति र आफ्नै विश्वदृष्टिकोण छ । जीव, जीवन र जगतको उत्पत्ति र सृष्टि सम्बन्धी उ...
डा. मतिप्रसाद ढकालज्यूद्वारा लेखिएको "रजस्वला किन बार्ने ?"(संस्कार चिन्तन–९) शीर्षकको लेख फेसबुकमा उहाँकै पोस्टमा पढिसकेपछि यसबारे केही विमर्श गर्ने इच्छा भयो । अतः रजस्वाला सम्बन्धी केही कुराप्रति ध्यान जान आवश्यक ठाने...